Mpanamboatra rafitra famokarana herinaratra | China Electric Brewing System Factory & mpamatsy
300L Rafitra fanamafisana herinaratra elektrika
Anaran'ny vokatra: Rafitra fanamafisana herinaratra herinaratra Fahaiza-manao: 300-600L Function: Amin'ny rafitra birao manontolo, misy ampahany roa hampiasaina fanafanana elektrika, ny iray mash tun, ny iray vilany. Fanafanana herinaratra Mash Tun dia sambo iray ampiasaina amin'ny fizotra mashing hanodinana ny zana-kazo amin'ny voamadinika torotoro ho siramamy ho an'ny fermentation. Ny paosy / kettle fametahana dia vita amin'ny vy na varahina tsy misy fangarony. Ny afo mivantana Mash Tun dia voaharo hitazona hafanana tsy tapaka. Anisan'izany ny afo mivantana burnustio ...
Anaran'ny vokatra: rafitra fanafoanana herinaratra herinaratra fahafaha-manao: 50-300L fiasa: Amin'ny rafitra famokarana herinaratra iray manontolo, misy ampahany roa hampiasaina fanafanana elektrika, ny iray mash tun, ny iray vilany. Fanafanana herinaratra Mash Tun dia sambo iray ampiasaina amin'ny fizotra mashing hanodinana ny zana-kazo amin'ny voamadinika torotoro ho siramamy ho an'ny fermentation. Ny paosy / kettle fametahana dia vita amin'ny vy na varahina tsy misy fangarony. Ny afo mivantana Mash Tun dia voaharo hitazona hafanana tsy tapaka. Anisan'izany ny fandoroana afo mivantana ...
Rafitra fanamafisana herinaratra 1000L
Amin'ny rafitra famokarana birao iray manontolo, misy ampahany roa hampiasaina fanafanana elektrika, ny iray mash tun, ny iray kettle.
Fanafanana herinaratra Mash Tun dia sambo iray ampiasaina amin'ny fizotra mashing hanodinana ny zana-kazo amin'ny voamadinika torotoro ho siramamy ho an'ny fermentation. Ny paosy / kettle fametahana dia vita amin'ny vy na varahina tsy misy fangarony.
Ny afo mivantana Mash Tun dia voaharo hitazona hafanana tsy tapaka. Anisan'izany ny efitrano fandoroana afo mivantana, ny fivoaran-tsetroka ary ny fitaovana fiarovana.